DHEGEYSO-MKu-xigeenka Puntland oo kahadlay heshiiskii Galkacyo iyo dhismaha sayladda. – Radio Daljir
DHEGEYSO-MKu-xigeenka Puntland oo kahadlay heshiiskii Galkacyo iyo dhismaha sayladda.
Nofeembar 15, 2016 9:38 g 0
Garoowe, Nov 16 2016–Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Cumey oo waraysi gaar ah siinayey Idaacadda Daljir ayaa waxa uu kahadlay heshiiskii kadhacay Galkacyo, halka uu marayo dhismaha sayladda Galkacyo iyo arrimo kale.
Eng Camey ayaa soodhoweeyey heshiiska Galkacyo ay dowladdu kula gashay Galmudug, wuxuuse dhaliilay in shirka wajigiisa labaad aan lagu qaban meesha boogtu ka daqnanayso, wuxuuna sidoo kale sheegay in dhismihii sayladdu dhammaad yahay.
Dhagayso Gudiga Gurmadka Abaaraha Puntland oo ka hadlay baaxada abaarta iyo dadaallada ay sameeyeen
Hay’adda Amnesty International oo sheegtay Kenya in aysan Qaxootiga Dhadhadhaan ku qabsi karin Soomaaliya in ay aadaan.